Semalt: Ny fitaovana SEO lehibe indrindra amin'ny orinasa
Mihamafy ny fifaninanana eo amin'ny tsenan'ny e-varotra, ary na dia ireo orinasa matanjaka indrindra aza dia tokony hanara-maso ny lazan'izy ireo amin'ny Internet.
Noho izany, misy safidy maro ho an'ny matihanina izay mitety tranonkala ho an'ny orinasa goavambe, ary koa ho an'ireo bilaogera vao manomboka misarika ireo mpamaky vaovao.
Na efa manam-pahaizana na efa eo am-panombohana aza ianao dia tsy hiandry ny mpifaninana aminao. Ka ataovy ho fanatsarana ny toerana misy anao amin'ny Internet: ilaina ho anao ny SEO!
Eny tokoa, SEO dia dingana sarotra izay mitaky ny fampiasana ireo fitaovana fanampiny. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, nametraka ny fitaovana tsara indrindra amin'ny famakafakana SEO ho an'ny orinasanao i Semalt . Akaiky ny ho avy. Noho izany, ataovy azo antoka fa manana ny toerana ambony ao amin'ny tranonkalanao ny tranonkalanao anio.
Jereo eto ny fitaovana sy paikady famandrihana Semalt ilaina indrindra izay hanampy anao hampiroborobo ny tranokalanao amin'ireo milina fikarohana ambony: SERP - CONTENT - GOOGLE WEBMASTERS - PAGE SPEED
SERP (Pejy fitadiavin'ny milina fikarohana)
Ny fizarana SERP dia misy fitaovana ho an'ny fanadihadian'ny tranokala mahay. Fantaro ireo teny fanalahidy izay ao amin'ny tranokalanao, tadiavo ireo pejy mitondra ny fifamoivoizana ary fantaro ny toerany ao amin'ny valin'ny fikarohana organik. Diniho ny tarigetran'ny mpifaninana aminao mba hananganana paikady fampiroboroboana mahomby.
Teny fanalahidy ao amin'ny TOP
Ity tatitra ity dia mampiseho ny teny fanalahidy rehetra izay ananan'ny tranonkalanao eo amin'ny valin'ny fikarohana ara-bavan'ny Google, ny pejy misy ny laharana ary ny toeran'ny SERP azy ho an'ny teny iray manokana.
Ampidiro ny sub- domain : azonao atao ny manadihady ny sehatra sy ny sahan-kaontinao na manilika azy ireo hahazo ny angon-drakitra ho an'ny domain-core fotsiny.
Fikarohana fikarohana: Ireo no milina fikarohana izay efa nandahatra ny tranokalanao raha kely indrindra amin'ny teny iray. Ny lisitra dia zahana amin'ny filaharam-peo midina amin'ny isan'ireo teny fanalahidy.
Ny valiny dia mampiseho aminao:
Ny isan'ny teny manan-danja amin'ny TOP: Ao amin'ity fizarana ity dia hanana tabilao izay mampiseho ny isan'ny teny ambony amin'ny TOP rehefa mandeha ny fotoana. Manampy anao hahita ny fiovana amin'ny isan'ny teny fanalahidy izay ao amin'ny tranokala ao amin'ny Google TOP 1-100 ny valin'ny fikarohana organik.
Ny fanaparitahana ireo teny fanalahidy nataon'i TOP: Eto, azonao jerena ny isan'ireo teny manan-danja ao amin'ny tranokala Google TOP -1-100 vokatry ny fikarohana organik, raha oharina amin'ny daty mialoha.
Ny laharana amin'ny teny fanalahidy: indreto misy latabatra iray izay mampiseho ny teny fanta-daza malaza indrindra amin'ny laharan'ny tranokala eo amin'ny valin'ny fikarohana ara-barotra Google. Azonao atao ny mahita ny toerany SERP amin'ny daty voafantina sy ny fomba niovany, mifanohitra amin'ny vanim-potoana teo aloha.
Azonao atao ny manivana ny angon-drakitra ao anaty latabatra amin'ny alàlan'ny fepetra isan-karazany:
Teny fanalahidy na ny ampahany aminy
URL na ny anjarany
Miova ny toerany
Ohatra, azonao atao ny manivana ny pejy rehetra milahatra amin'ny teny fanalahidy misy ny teny hoe '' mividy '' ary mahazo toerana ambony-1 amin'ny vokatra fikarohana organik.
Mampiseho aminao ity latabatra ity:
Ny teny fanalahidy izay tranonkala iray dia ao amin'ny valin'ny fikarohana Google
URL ny pejy misy ny laharan'ny tranonkalanao sy ny toerany SERP amin'ny teny fototra iray.
Ny toerana misy ny pejin-tranonkala ao amin'ny Google TOP ho an'ny teny fototra kendrena amin'ny daty voafaritra.
Ny salan'isa karana isam-bolana mikaroka teny mikendry ho an'ny kendrena Google.
Pejy tsara indrindra
Ato amin'ity fizarana ity dia hahita ireo pejy manentana ny fizarana ambony indrindra organika ao amin'ny tranonkalanao. Tandremo tsara azy ireo: amboary ny hadisoan'izy ireo amin'ny takelaka SEO, ampio ny atiny tsy manam-paharoa, ary amporisiho ireo takelaka ireo mba hahitana fifamoivoizana organik kokoa amin'ny fikarohana Google. Ao anatin'izany dia hampiseho aminao ny valiny:
Pejy tsara indrindra rehefa mandeha ny fotoana: hahazo tabilainao mampiseho ny fiovana amin'ny isan'ny pejin-tranonkala ao amin'ny Google TOP ianao mandritra ny tsingerin'ny fiainana manontolo. Avy eo Amin'ny fanodinana ny mizana, azonao atao ny mijery ny angona mandritra ny herinandro na iray volana.
Fahasamihafana: eto, azonao jerena ny habetsahan'ny tranokala ao amin'ny Google TOP 1-100 vokatry ny fikarohana organik, raha oharina amin'ny daty mialoha.
Momba ireo teny manan-danja voafidy hita eto: ity tabilao ity dia mampiseho ny fiovana amin'ny isan'ny teny manan-danja ireo pejy voafantina nofaritana tao amin'ny Google TOP ho an'ny tsingerin'ny fiainana iray manontolo.
Ao amin'ity fizarana ity dia hahita ny tranokala rehetra izay ao amin'ny Google TOP 1-100 ho an'ny teny fanalahidy mitovy amin'ilay karana tranokalanao. Fantaro hoe inona ny toeran'ny tranonkalanao eo amin'ireo mpifaninana aminao amin'ny alàlan'ny isan'ny teny rehetra ao amin'ny TOP-100
Ianaro raha toa ny loharano tokantranonao dia toa ny loharano tokana na tsia ny Google. Eto ianao dia ho afaka manamarina ny isan-jatony ny maha-tokana ny votoatinao, fantaro hoe inona amin'ireo ampahan-dahatsoratra iray no voaroba, ary jereo ireo loharano voalohany.
Famaritana mampiavaka ny pejy
Fantaro na mikarakara ny tranokalanao ho toy ny tsy manam-paharoa ny iray na tsia. Na dia azonao antoka aza fa miavaka ny votoatinao dia mety nalain'ny olon-kafa ilay izy. Ary raha misy pejin-tranonkala hafa misy ny pejin-tranonkala hafa miaraka amin'ny atiny, dia hoheverin'i Google ho loharano atiny voalohany, fa ny pejin-tranonkalanao dia hantsoina hoe voarindra. Aza hadino hatrany fa ny salan'isan'ny tranokala avo lenta dia mety hitarika sazy Google.
Ny tanjona lehibe amin'ny fisavana pejy
Ny tanjona voalohany amin'ny serivisy fanamarinana ao amin'ny pejy dia ny fitadiavana ny votoaty nangalarin'ireo mpifaninana, izay azon'ny mpanoratra aleha ary ny tranonkalanao dia ho lasa duplicate ihany ary tsy haka toerana ambony.
Ny fanamarinana dia atao amin'ny dingana telo telo. Voalohany, nanondro ny adiresin'ilay tranokala, tao amin'ny faritra URL ianao, avy eo dia nanondro ianao raha te-hanao ny fanamarinana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena (google.com (All) - International) na amin'ny tranonkala frantsay (google.fr (frantsay) - France) ary ankehitriny dia manokatra ny fanamarinana ianao amin'ny fanerena ny bokotra maitso CHECK. Izahay dia ho hitady azy io ary haseho ny fizarana rehetra.
Avy eo, azonao atao ny manamarina fizarana rehetra ao amin'ny bokotra iray!
81-100% tsy manam-paharoa
Ny motera mpikaroka no tena mihevitra fa tsy manam-paharoa ity pejy ity. Ny toerana misy ny tranonkala dia mety hitombo tsy mahasosotra ny serasera.
51-80% tsy manam-paharoa
Ny motera mpikaroka no tena mety hihevitra ny famoahana an'io pejy io manoratra indray. Ny toeran'ny tranokala dia mety hitombo na, fara fahakeliny, dia tsy hiharatsy. Ho fampiroboroboana ny pejinao, mamorona atiny manokana kokoa sy mahasoa kokoa.
0-50% tsy manam-paharoa
Ny motera mpikaroka no tena mety mihevitra ny lozisialy eto amin'ity pejy ity ho mampidi-doza. Ny fivoaran'ny toerana dia tsy azo inoana. Tokony hasolo anao tsy manam-paharoa ny konteninao ankehitriny.
Aorian'ireo tapany rehetra ireo dia azonao jerena ihany koa ny vokatrao roa lehibe, izay:
Ny atiny : Eto, azonao atao ny mahita ny votoatin'ny lahatsoratra rehetra hitan'i Googlebot amin'ny tranokala nomena. Misongadina ireo ampahany amin'ny atiny.
Loharanon'ny votoatiny tany am-boalohany: Hita eto amin'ity latabatra ity ireo tranokala raisin'i Google ho toy ny loharanon'ny loharano omena azy. Avy eo, azonao atao ny manamarina hoe inona amin'ireo ampahany ao amin'ny atiny no jerena amin'ireo tranonkala tsirairay ireo.
Mariho fa afaka hihaona amin'ny ekipan'ny Semalt ianao amin'ny fanontaniana rehetra momba ny vahaolana ho an'ny mampiavaka ny tranonkalanao.
Mitantana tranonkala marobe mampiasa ny mpampiasa interface tsara anay. Alefaso amin'ny Google ny orinasanao na URL manokana ary arotsony moramora ny fampisehoana azy ireo. Ataovy azo antoka ny manamboatra kaonty Google hahazoana fidirana amin'ny fizarana Google Webmasters.
Google webmaster dia serivisy mampiseho ny fisehoan'ny tranonkalanao amin'ny valin'ny fikarohana Google ary manampy anao hamantatra ireo olana momba ny fanondroana. Ao amin'ity tranokala ity, azonao atao ny mandefa ny tranokalanao sy ny sitemap ho lisitra iray manontolo ary mangataka ny fanondroan'izy ireo avy amin'ny Google.
Misy ny fananana: Sivana ny URL na ny ampahany aminy. Azonao atao ny mahita URL izay misy na tsy ahitanao teny manokana ary koa ny lalao URL misy.
Ireo metaly ireo dia mampiseho ny mahomby amin'ny tranokalanao. Azonao atao ny mijery azy ireo amin'ny fotoana voafetra / fotoana voafetra ary ampitahao ireo data. Ity serivisy ity dia manampy amin'ny fahafantarana ny tanjaky ny tranokalanao sy ny lesoka izay manakana azy tsy hiditra ao anaty TOP 1
Amin'ity sakana ity, azonao atao ny mandefa ny sitemaps an'ny tranokalanao amin'ny Google mba hahitana hoe iza ireo sitrapony voatonona ary misy hadisoana ireo. Misafidiana sehatra hijerena lisitry ny sitemaps.
Jereo raha mifanaraka amin'ny takian'ny Google ny vesatry ny pejin-tranonkalanao. Eto ianao dia homena anao ny fampahalalana momba ireo lesoka efa tokony amboarina ary ireo toro-hevitra momba ny fanatsarana ny asan'ny tranokalanao.
Nahoana no zava-dehibe ny hafaingam-pandehan'ny tranokala?
Ny hafaingam-pandeha izay mitondra ny tranokala no antony iray. Ny fotoana fangalarana lava dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny vokatra. Yandex sy Google dia maniry kokoa ireo loharano haingana.
Ny fotoana faran'izay tsara indrindra dia 2-3 segondra. Tsara - ny fotoana famaliana an'ny mpampiasa dia 0.5 segondra.
Ankehitriny, ny ankamaroan'ny mpamaky amin'ny Internet dia mampiasa fitaovana finday mba hitsidihana ireo tranonkala. Ary fantsona fidirana miadana kokoa sy loharanon-karena anatiny no betsaka kokoa noho ny solosaina manokana.
Fantatry ny rehetra fa ratsy ny toerana iray miadana. Raha mihena tsikelikely ilay tranokala, dia manana olana lehibe ny mpitsidika hamaha ny asany, ary manelingelina azy fotsiny izany.
Saingy na dia tsy dia mahazatra loatra aza ny zava-misy amin'ny loharanom-tranonkala, ny fahatarana kely amin'ny fampisehoana ilay tranonkala dia niteraka faharesen'ny mpihaino sy ny fihenan'ny tahan'ny fiovam-po.
Ny manam-pahaizana momba ny fivarotana an-tserasera dia nahita fa rehefa nidina 100 ms ny hafainganam-pandehan'ny download, dia nidina 1% avy hatrany ny varotra varotra.
Noho izany, ny olan'ny hafainganana ny hafainganana ny fifamoivoizana dia mila voavaha eo amin'ny lafiny maro.
Ary noho ny antony tsara, Semalt dia namolavola io fitaovana fametahana haingam-pandeha pejy io hamakafaka ny marika mety momba ny hafainganana ny hafainganam-pandehan'ny tranokala sy pejy manokana.
Mpanadihady hafainganana pejy
Ny mpandalina ny hafainganam-pandeha dia ampiasaina hamaritana raha mahafeno ny fepetra takian'ny milina fikarohana Google ny fotoana. Mahafantatra ireo lesoka azo raikitra ihany koa izy io ary misy fanatsarana azo atao hanatsarana ny fotoana lanin'ny pejinao.
Aorian'ny famakafakana, tsy vitan'ny hoe ny tatitra ho an'ny dikan-tsolosa ihany ianao, fa ho an'ny dikan-finday koa.
Ho an'ny valiny tsirairay avy dia ho hitanao:
Fotoam-piatrehana pejy: ny habetsaky ny fotoana takiana amin'ny pejy ho tonga tafaray tanteraka.
Fanamarinana mahomby: Ny isan'ny fitsipi-maso izay nandia ny pejy web anao dia nahomby.
Fahadisoana amboarina: Ny fanovana ireo lesoka ireo dia hanampy ny tranokalan'ny pejinao haingana kokoa
Miaraka amin'i Semalt, azonao atao koa ny mangataka consultation maimaimpoana ary hahafantatra ny fomba hanatsarana ny tranokalanao: